Chip -ka ugu fiican eeyaha oo si fiican loo koontaroolo xayawaankaaga | Eeyaha Adduunka
Nat Cerezo | 11/10/2021 08:55 | Qalabka eyga
Chip for eydu waa badeecad lagama maarmaan ah si loo aqoonsado xayawaankaaga iyo in la dedejiyo oo la fududeeyo tallaabooyinka haddii ay dhacdo khasaare. Chip -ka wargeliya diiwaanka oo lagu duray maqaarka maqaarkeenna waxaa kaliya gelin kara dhakhtarka xoolaha, hase yeeshee, marka kiiskan la sameeyo, waxaa laga yaabaa inaan danaynno xoojinta ammaanka eeygeena.
Sidaa darteed, Suuqa waxaan ka helnaa badeecado aad u xiiso badan, qoorta GPS, oo aan ku garan karno halka uu eeygu joogo mar walba oo ay ku jiraan hawlo aad u faa'iido badan. In this article waxaan ka hadleynaa iyaga iyo wax badan oo la xiriira chip. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad fiiriso maqaalkan kale ee ku saabsan 4ta tallaabo ee muhiimka ah marka la korsanayo eyga.
Akhristahayaga Leeme ee...
143 10pcs/Samee Microchip...
GPS Collar Collar ...
1 Chip -ka ugu fiican eeyaha
1.1 GPS leh caymis caalami ah
1.2 Akhriste chip chip
1.3 GPS leh lambar QR
1.4 Akhriste chip yar oo is haysta
1.5 Chip eeyga GPS
1.6 Qoorta GPS -ka ee waarta
2 Waa maxay jajabka eeyaha?
3 Muhiimadda chip
4 Ma khasab baa in lagu garto eeygayga microchip?
5 Meesha laga iibsado jajabka eyga
Chip -ka ugu fiican eeyaha
GPS leh caymis caalami ah
Meeshaan wax ku oolka ah ama GPS eeydu waa aalad ku dhejisa qoorta eygaaga. Waxay leedahay hawlo badan oo aad u qabow oo waxtar leh si aadan u lumin xayawaankaaga. Tusaale ahaan, GPS -kiisu wuxuu ka shaqeeyaa in ka badan 150 waddan, wuxuu leeyahay hawsha xayndaabka badbaadada taas oo digniin la dhaqaajinaayo marka eeygaagu ka tago aagga aad ku qeexday inuu ammaan yahay oo aad xitaa arki karto inta kalori ee uu gubto si uu ugu habboonaado .
Si kastaba ha ahaatee, Sida qaar badan oo GPS -kan ah, maanka ku hay, marka lagu daro aaladda, waa inaad heshiis qandaraas bille ah, hal sano, laba ama shan si aad u awooddo inaad isticmaasho dhammaan shaqooyinka, iyo sidoo kale inaad ka soo dejiso codsi taleefankaaga gacanta.
Akhriste chip chip
Chip waxtar leh iyo akhristaha microchip, aalad ay si gaar ah u adeegsadaan dhakhaatiirta xoolaha iyo xirfadleyda si ay u awoodaan inay akhriyaan xogta ka timid xayawaanka xayawaanka ah. Waxay ka shaqeysaa dhammaan noocyada xayawaanka guriga: eeyaha, bisadaha… iyo xitaa qoolleyda! Hase yeeshee, kuma shaqayso xoolaha beeraha sida idaha iyo fardaha. Waa inaad si fudud ugu soo dhawaataa akhristaha meel u jirta 10 sentimitir ama ka yar meesha uu jabku yaal si aaladdu u akhrido oo waxa ku jira ay ka muuqdaan shaashadda. Intaa waxaa dheer, ku -dallacsiinta waa mid aad u fudud, waxaad u baahan tahay oo keliya aaladda USB.
GPS leh lambar QR
QR4G.com Saxanka GPS ...
Waxaa suurtogal ah GPS -ka ugu jaban ee aad heli karto. In kasta oo aysan ka koobnayn wax jab ah eeyaha, haddana aad bay faa'iido u leedahay in la helo eygaaga iyada oo aan loo baahnayn qalab qaali ah ama leh qorshe lacag bixin. Waxay ka kooban tahay calaamad leh koodh QR. Markay lunto, qofka helaa waa inuu sawir ka qaataa koodhka si uu u arko xogta xayawaanka (magaca, cinwaanka, xasaasiyadda ...) iyo milkiiluhu inuu helo emayl leh meesha laga akhriyay sameeyey.
Akhriste chip yar oo is haysta
Sonew Reader ee ...
Si ka duwan moodeelkii aan hore ugu talinay, akhristaha chip wuxuu ku habboon yahay dhammaan noocyada xayawaanka, ma aha eeyaha oo keliya, maadaama ay sidoo kale oggolaanayso aqoonsiga idaha ama fardaha. Aad bay u fududahay in la isticmaalo, maadaama ay tahay inaad u soo dhoweyso oo keliya aagga meesha jabku yahay si aad u akhrido. Intaa waxaa dheer, waxaad ku shuban kartaa USB oo, marka kombiyuutarkaagu aqoonsado, waxaad ka maamuli kartaa faylka akhrinta chip ee galka. Ugu dambayntii, shaashadu waxay leedahay muuqaal aad u sarreeya.
Chip eeyga GPS
Eeyaha Daqiiqda 2 - The ...
Chip kale eeyaha oo aad ku dari karto qoorta xayawaankaaga si aad mar walba gacanta ugu dhigto. Qaabkani waa ka-hortag daadis iyo, marka lagu daro, waxaa ku jira howlo aad u xiiso badan, sida GPS laftiisa oo leh meel nool, laakiin sidoo kale digniin baxsad. Waa biyo -mareen ilaa hal mitir iyo, sida badeecooyin badan oo noocan ah, si ay u shaqayso waxay u baahan tahay rukumasho noqon karta bille, sannadle ama saddex -sannadood. Ugu dambayn, ku dar taariikh leh waddooyinkii eygu raacay intii lagu jiray socodka.
Qoorta GPS -ka ee waarta
KIPPY - EVO - Cusub ...
Oo waxaan ku dhammaynnaa GPS -kan xiisaha leh, oo leh naqshad aad u qabow oo lagu heli karo saddex midab, cagaar, bunni ama casaan, oo aad ku dhejin karto qoorta eygaaga si aad si joogto ah ugu joogto. Waa mid aan biyuhu lahayn, oo ka mid ah shaqooyinkiisa aadka u xiisaha badan, ee ku badan badeecadaha kale, sida GPS ama xayndaabka amniga, waxay kaloo leedahay astaamo u gaar ah oo ka dhigi kara ikhtiyaar kuu fiican, tusaale ahaan, kharashka isdiiwaangalinta, wax badan ka jaban moodooyinka kale (in ka badan € 3) ama culeyska, maadaama ay aad u fudud tahay.
Waa maxay jajabka eeyaha?
Maqaalkan waxaan kuugu soo bandhignay dhowr maqaal oo aad ka heli karto Amazon iyo intaas Waxay kuu oggolaanayaan inaad la socotid eeygaaga adoo adeegsanaya GPS ama akhrin kara jabkii ay hore u beerteen. Sida iska cad, qofku si farxad leh uguma tallaali karo guntiga aqoonsiga eeygiisa, laakiin waa inuu u tagaa dhakhtarka xoolaha.
Chips, dhab ahaantii, waxay yihiin microchips -ka yaryar oo ku duuban kaabsal si hoose loogu geliyo xayawaankaaga. Waxaa lagu sameeyaa jajab fudud, mana keenaan wax raaxo ah xayawaanka, mana keenaan xasaasiyad. Taa bedelkeeda, waa aalad runtii waxtar u leh helitaanka xayawaankaaga haddii uu lumo.
Sidaan u nidhi, jajabka waxaa ku beeray dhakhtarka xoolaha. Tan waxaa ku jira xogta qofka, sida cinwaanka, magaca iyo lambarka taleefanka, waxayna sidoo kale oggolaanaysaa in la hayo diiwaanka la kontoroolo ee dhammaan xayawaanka rabaayadda ah. Habsocodku waa mid aad u fudud: waa inaad si fudud u buuxisaa foomka xogtaada, kaas oo la gelin doono jajabka, dhakhtarka xoolaha ayaa ogeysiin doona diiwaanka iyo dhowr toddobaad gudahood waxaad ka heli doontaa warqad gurigaaga, warqad xaqiijinaysa xayawaanka ayaa la diiwaangeliyey iyo Aqoonsiga sumadda oo leh koodh QR ah oo aad ku ridi karto qoorta xayawaankaaga sidii badbaado dheeraad ah.
Sidee u qiyaasi kartaa aad iyo aad bay muhiim u tahay in aad xogtaada shakhsi ahaaneed la socoto, maadaama, haddii ay dhacdo in eeygaagu lumo, way ku siin karaan.
Waxaa la sheegay in sawirku uu qiimihiisu yahay kun eray, oo waxaan isku mid ka dhihi karnaa boqolleyda, taas si fiican u muujiya qaar ka mid ah xaqiiqooyinka iyo xaaladaha ku saabsan muhiimadda jabku leeyahay. Marka loo eego daraasadda 2019 Affinity:
Kaliya 34,3% eeyaha ay soo qaadeen ilaaliyayaashu waxay wataan jajab
Kuwaas, waa la gaaray ku soo celi 61% milkiilayaashooda
Si kastaba ha ahaatee, haddii aan eegno tirada guud eeyaha imanaya hoyga, sWaxa kaliya oo suurtogal ah in la soo celiyo 18%
39% ee haray eeyaha ma aadi karaan guriga ama sababtoo ah qoysaska ka tagay ama waayey iyaga oo aan qaadan telefoonka ama sababta oo ah xog khaldan (waa sababta aan kuugu sheegnay inay aad muhiim u tahay in diiwaanka la cusboonaysiiyo)
Ma khasab baa in lagu garto eeygayga microchip?
Dalka Spain waxaa khasab ah in la aqoonsado xayawaan rabaayad ah, in kasta oo aysan khasab ahayn (Haa waxay ku jirtaa eyda halista ah), tusaale ahaan, iyada oo loo marayo tattoo yar, summad ...
Si kastaba ha ahaatee, In kasta oo sharci ahaan aan nalooga baahnayn in lagu beero microchip -ka xayawaanka rabaayadda ah, haddana qof kasta oo wanaagsan oo qiimahoodu yahay milixdooda ayaa samayn doona. Sidii aan horay u sheegnay, microchip -ku waa lama huraan si loo helo xayawaankeenna haddii uu lumo ama la xado, marka lagu daro, waxay ka caawisaa ka -hortagga dayaca. Marka la soo koobo, ma aha oo kaliya nabdoonaanta xayawaanka, waxay sidoo kale hubineysaa wanaaggiisa, maadaama ay kordhineyso fursadaha ay ugu laaban karaan qoyskooda.
Meesha laga iibsado jajabka eyga
Marka xigta kaliya kuma tusinno meesha aad ka iibsan karto chips eeyaha, laakiin waxaan kaloo kuu sheegnaa meesha aad wax ka iibsaneyso aqoonsiyo kala duwan si loo ilaaliyo xayawaankaaga:
Si aad ugu aqoonsato eygaaga jajab subcutaneous ah, waxaad u baahan doontaa inaad geyso a dhakhtarka xoolaha. Kani (ama kan) ayaa mas'uul ka noqon doona duridda iyo wargelinta diiwaanka xogta xayawaanka. Nidaamkan waxaa kaliya lagu samayn karaa dhakhtarka xoolaha.
Haddii lagu daro chip waxaad rabtaa inaad haysato mid kale siyaabo dheeraad ah si aad u ilaaliso eygaaga, waxaa jira ikhtiyaaro kale oo badan oo aad haysato:
En Amazon Waxaad ka heli doontaa badeecooyin badan sida qoorta GPS, taargooyinka, taarikada QR ... taas oo kuu oggolaan doonta inaad xakameyso eygaaga oo, haddii ay baxsato, waxay noqon karaan caawimaad weyn si loo helo sida ugu dhakhsaha badan .
Sidoo kale, gudaha dukaamada xoolaha ee internetka sida TiendaAnimal ama Kiwoko waxa kale oo aad ka heli doontaa calaamado iyo silsilado tiro badan, inkasta oo ay leeyihiin kala duwanaansho yar. Waxay sidoo kale bixiyaan GPS magac magac leh oo xiiso leh oo adiga waxtar kuu yeelan kara.
Ugu dambeyntiina, waxaa jira magacyada telefoonka (sida Vodafone) ama GPS -ka baabuurka (sida Garmin) oo iyaguna bixiya noocyadooda gaarka ah ee qoor -gooyaha eeyaha. Hase yeeshee, sida caadiga ah xoogaa way ka qaalisan yihiin.
Chips eeyaha waa badeecad aad u fiican si loo ilaaliyo eeygaaga haddii ay dhacdo khasaare, sax? Noo sheeg, wax khibrad ah ma u lahayd mid ka mid ah calaamadahan? Eygaagu ma leeyahay jajab? Miyaad u malaynaysaa inay taasi ku filan tahay mise waxaad doorbideysaa inaad ku xoojiso GPS?
Fuentes: Isku xirnaanshaha Fundación
Wadada buuxda ee maqaalka: Dunida eyga » Eeyaha Guud » Qalabka eyga » Chip -ka ugu fiican eeyaha iyo haysashada xayawaankaaga oo si fiican loo kontoroolo
Sida loo nadiifiyo dhegaha eyga